Home Wararka Xildhibaan Saalim Caliyo oo lagu wado in uu noqdo guddoomiyaha guddiga Maaliyadda...
Xildhibaan Saalim Caliyo oo lagu wado in uu noqdo guddoomiyaha guddiga Maaliyadda (Xog)
Sida aan xogta ku helnay waxa guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda Baarlabaanka lagu wadan in maalinta berrito ah loo doorto Xil. Saalim Caliyow Ibrow. Waxaa dadaal badan ku bixiyay Xildhibaan Khadijo Maxamed Diiriye oo mar ahayd xaaska Xil. Saalim Caliyow.
Guddiga Maaliyadda aya noqonaayo mid si toos ah looga maamulo xafiiska RW Xasan Cali Kheyre si aanay u dhicin isla xisaabtan lagu sameeyo xukuumadda iyo hay’adaha dowladda dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha.
Ujeedka loo kala diray aya ah in ay noqdaan guddiga maaliyadda mid indhaha ka xirta musuqa iyo boobka uu RW Kheyre ku hayo dalka, waana midda keentay isku dhaca Baarlabaanka iyo Gud. Mursal kaddib markii ay gudiga Maaliyadda soo saareen warbixin ay ku sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo Xafiiska RW Kheyre ay ku maqan tahay adduun dhan $24 Milyan oo dollar.
Kala dirista uu kala diray Gud. Mursal guddiga maaliyadda aya noqoneyso sharci darro, waayo Guddoomiyaha awood uma laha in uu kala diro guddi baarlabaan oo la soo doortay waana midda keentay in Gud. Mursal uu markii hore diiday kala diristii uu kala diray isla guddigaan G/X Cabdiwali Muudeey.
Waxaa faraha kasii baxayo kala danbeyntii iyo ilaalinta sharciga oo ay ahayd in ay ilaaliyaan seddexda masuul ee dalka ugu sarreeyo. Waa nasiib darro in Gud. Mursal uu lacag iyo laaluush ka doorbiday ilaalinta sharciga iyo dastuurka uu u dhaartay.
Previous articleQalbi Dhagax arrived in Dhagaxbuur with a hero reception
Next articleMW. Farmajo iyo RW. Kheyre oo isku khilaafay isku shaandheyntii uu watay Ra’isul Wasaaraha (Xog +Magacyada)
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo amar cusub soo saaray